Archive du 20170610
Andry Rajoelina Ny paikadiny vaovao…
Manomana fatratra ny fifidianana 2018 i Andry Rajoelina amin’izao fotoana izao na tsy maneho hevitra amin’ny raharaha politika aza.
Marc Ravalomanana Vonona hanarina an’i Madagasikara
Nitsidika an’Ihazolava, tanàna eo anelanelan'Ambatolampy sy Ambohimandroso, toerana misy orinasa iray manamboatra biriky na irony antsoina hoe “parpaing” irony i Marc Ravalomanana omaly. Tanimanga sy tanimena no entina manamboatra azy ary nahavariana ny dingana arahina amin'ny fanamboarana azy ireny.
Depiote Rastany Nanampy ireo traboina teny Manjakamiadana
Noho ny fangatahan’ireo traboina rava sy simba trano noho ny fandalovan’ny rivodoza Enawo farany teo, teny amin’ny fokontanin’i Manjakamiadana eny “La haute ville”,
Mihoron-koditra sahady !
Renay izao ry Jean fa mafimafy amin'izay ny tsindry amin'ny hampidirana an-draneny eny Ambaniatsinana, ka may volon-tratra indray ianareo a !
Nilatsaka ny didy Voarara ny tsipoapoaka
Namoaka fanambarana ny minisiteran’ny varotra sy ny fanjifana fa noho ny antony filaminana dia hankalazaina tsy misy tsipoapoaka ny fetim-pirenena amin’ity 2017 ity.
Asa fanaovan-gazety Tena mahaliana ny tanora ankehitriny
Anisan’ny lalam-piofanana iray tena mahaliana ny tanora eto amintsika ankehitriny ny serasera hahafahana miditra amin’ny asa fanaovan-gazety.
Inona no haloaky ny ampitso ?
Tapitra ny fampiatoan’ny fitsarana ny asany ary nisy ny zavatra maro nambaran’izy ireo nandritra ny fanatsaharana ny asa tao anatin’ny fotoana voafetra. Inona no hiseho aorian’ireny ?
Hahazo fitsaboana maimaimpoana avokoa ireo olona any amin’ny Faritra Melaky amin’ity volana jona ity. Tafiditra ao ireo mila fandidiana maika nefa tsy nanana fahafahana.
Fizahantany eto Madagasikara Hiditra lalina kokoa ny Sinoa
Delegasionina mafonja avy amin’ny ofisim-pirenena momba ny fizahantany sinoa no noraisin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha omaly.
BNI Madagascar Manohana hatrany ny tanora Malagasy
Banky iray anisan’ny manohana akaiky ny fivoaran’ny fomba fanabeazana eto amintsika ny Banky BNI Madagascar.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny asa tanana Ankalazaina any Moramanga anio
Hankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asa tanana anio sabotsy 10 jona ny any amin’ny distrikan’i Moramanga. Hametraka tantara goavana ho an’ity distrika iray ity sy ireo mponina ao aminy izany.
Fianakavian’ny jeneraly Paza Notafihin’ny andian-jiolahy
Efa mampiteny ny moana ny tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena amin’izao fotoana.
Hentitra ny minisitry ny polisy « Tsy maintsy esorina ny ahidratsy »
Natao maly zoma 9 jona ny famindram-pahefana teo amin’ny kaomandin’ny sekolim-pirenen’ny polisy Antsirabe na ny ENIAP. Ny kaomisera divizionera Talily Damy indray no hitantana ny sekoli-pirenen’ny “Inspecteur et Agent de Police” ankehitriny,